Frank Lampard Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Uu U Sheegay Mason
Tababare Frank Lampard ayaa tibaaxay in xiddiga khadka dhexe ee kooxdiisa uu waqtigii nasashada u sheegay in kubbadaha lugtiisa soo gala uu ku toogto goolhaye David de Gea, kaddib markii qalad uu sameeyey dhamaadka qaybta hore uu naxdin ku abuuray.
Chelsea oo semi-finalka FA Cup 3-1 ku garaacay Manchester United, waxay finalka la ciyaari doonaa Arsenal marka ay taariikhdu tahay August 1, waxaana laba qalad oo uu sameeyey David De Gea faa’iido ay u noqotay Olivier Giroud iyo Mason Mount oo kooxdooda hoggaanka u dhiibay ka hor intii aanu Maguire iska dhalin gool saddexaad.
Frank Lampard oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Mason Mount uu waqtigii nashada u sheegay in marka goolhayeyaasha qalad ay sameeyeen gool looga dhaliyo, inay wiiqmaan, isla markaana ay noqdaan kuwo u nugul inay mar kale kubbado sahal ahi ka dhashaan, sidaas darteedna uu kubbadaha ku toogto.
Mount oo qaatay talada tababarihiisa ayaa daqiiqaddii labaad ee bilowga qaybta dambe waxa uu kubbad diciif ah ku ganay goolka uu waardiyaha ka ahaa De Gea, waxaana dhacday sidii uu Lampard usii sheegay.
Lampard oo sharraxaya wixii uu u sheegay Mount ayaa yidhi: “Waxaan ogaa in dadku ay mar walba farta ku fiiqaan goolhayeyaasha marka ay sameeyaan qaladaad noocaas oo kale ah, sababtoo ah way ku adkaataa. Laakiin waxa aan u sheegay Mason Mount waqtigii nashada waxay ahayd in aan doonayo inaan arko isaga oo kubbadaha weerarka geynaya, inuu toogto goolka, iskuna dayo inuu koorneyaasha kaga soo qalloociyo, sida ay aniga ila tahayna, marka aad goolhayeyaasha wanaagsan waajahayso, waa inaad bannaanka ka toogasho goolka, De Gea na waa goolhaye wanaagsan.
“Dabcan kubadda si fiican uma qabanin oo way gashay, laga yaabaa inay noqonayso qalad uu sameeyey, laakiin waxay u badan tahay in ciyaartoydu ay qabteen shaqadii aan u diray.
“Mason waxaan ka doonayay inaan arko isaga oo kubbadaha goolka ku tooganaya. Nasiib wanaag, saddex daqiiqadood kaddib markii aan u sheegay, wuxuu dhaliyey goolka.”
axadle 3841 posts